Iindaba - IHuawei itshintsha umahluko
I-Huawei itshintsha umahluko
Ukutshintshwa kwesiko kweHuawei kuphuhliswe ukusuka kwibhlorho kwaye kungokwesibini isendlalelo seOSI, isixhobo sedatha yokuqhagamshela izixhobo. Idibanisa ngokwedilesi ye-MAC, ikhethe indlela etafileni yesikhululo, kunye nokusekwa kunye nokugcinwa kwetafile yesikhululo kwenziwa ngokuzenzekelayo kukutshintsha kweCISCO Cisco. Umzila ungowesigaba sesithathu se-OSI, oko kukuthi, isixhobo sokwenza inethiwekhi. Idibanisa ngokwedilesi ye-IP kwaye iveliswe ngomgaqo wendlela yokuhamba kwetafile. Olona ncedo lukhulu kuluhlu lwee-10 ze-Gigabit luyakhawuleza. Ngenxa yokuba utshintsho lufuna kuphela ukuchonga idilesi ye-MAC kwisakhelo, ivelisa ngokuthe ngqo kwaye ikhethe ukuhanjiswa kwezibuko i-algorithm esekwe kwidilesi ye-MAC. Ialgorithm ilula kwaye kulula ukuyiphumeza nge-ASIC, ke isantya sokudlulisa siphezulu kakhulu. Kodwa indlela yokusebenza yotshintsho ikwazisa ezinye iingxaki.
1.Luphawu: Ngokwokufunda idilesi yeHuawei kunye nokuseta iitafile ze-algorithm, ii-loops azivumelekanga phakathi kokutshintsha. Nje ukuba kubekho iluphu, umthi ojikelezayo we-algorithm kufuneka uqalwe ukuvimba izibuko elenza iluphu. Umgaqo wokuhambisa umzila awunangxaki. Zinokubakho iindlela ezininzi phakathi kweerutha zokulinganisa umthwalo kunye nokuphucula ukuthembeka.
2. Ukuthwala umthwalo: Inokubakho kuphela ijelo elinye phakathi kokutshintsha kweHuawei, ukuze ulwazi lujolise kwikhonkco elinye lonxibelelwano, kwaye ukuhanjiswa okunamandla akunakwenzeka ukulinganisa umthwalo. Umzila we-algorithm yomgaqo olandelwayo unokukuthintela oku. I-OSPF yokuhamba ngomgaqo olandelwayo i-algorithm ayinako ukuvelisa iindlela ezininzi kuphela, kodwa ikhethe neendlela ezahlukeneyo ezifanelekileyo zezicelo ezahlukeneyo zenethiwekhi.
Ulawulo losasazo: Ukutshintsha kweHuawei kunokunciphisa kuphela idomain yongquzulwano, kodwa hayi indawo yosasazo. Inethiwekhi yonke etshintshiweyo yindawo enkulu yosasazo, kwaye imiyalezo yosasazo isasazeke kwinethiwekhi etshintshiweyo. I-router iyakwazi ukwahlula i-domain, kwaye iipakethi zokusasaza azikwazi ukuqhubeka nokusasazwa nge-router.
Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Umthumeli weXfp, Imodyuli yeFiber Optical, IHuawei Qsfp +, I-Sfp C ++, Ixabiso leHuawei Olt,